Wafti uu Hogaaminayo Cabdifatax Sheekh Cabdulahi oo Shirar Isdaba Joog ah ku Qabanaya Magaalada Minneapolis ee Gabalka Minneasoto – Rasaasa News
Wafti uu Hogaaminayo Cabdifatax Sheekh Cabdulahi oo Shirar Isdaba Joog ah ku Qabanaya Magaalada Minneapolis ee Gabalka Minneasoto
Aug 9, 2010 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, Wafti uu Hogaaminayo Cabdifatax Sheekh Cabdulahi oo Shirar Isdaba Joog ah ku Qabanaya Magaalada Minneapolis ee gabalka Minneasoto
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Guddoomiyaha Xisbiga talada DDS iyo Waftigii ka socday Ismaamulka Somalida ee baryahanba booqashada ku joogay dalka Maraykanka ayaa kulan balaadhan waxay ku qabteen magaalada Minneapolis. Waxaana hoolka shirarka ee Convention centre si fowqal caqli ah u soo buux dhaafiyey dadweyne aan xisaab lahayn.
Cabdifatax oo ayaa waxaa uu khudbad aad u qiimo badan oo ay aad u xiisaynayeen dadkii ka soo qayb galay ka jeediyey hoolka shirka isaga oo ay hareero taagan yihiin, gudoomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee gabalka Minneasoto iyo waftigii la socday.
Intii uu khudbada waday Cabdifatax ayaa waxaad dadweynihii dhagaysanayey aad moodaysay sidii dadka dhagaysanaya khudbada salaada Jamcaha oo uu sheekh Mufti ah akhriyayo.
Fikirkii laga qabay magaalada iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ahayd in qaar ka mid ah ay ka soo horjeedaan nabada sida Jwxo-shiil, ayaa been noqotay maanta, dadweynaha ku nool Magaalada Minneapolis ayaa 100% taageersan nabada socota.
Indhahaa markhaati ah ee daawo dadwenaha sawirka dheega ku dhagan.